राज्यको ५ अर्ब गायब : राज्यकोषको एक रुपैयाँ पनि चलाउँदिन : डा. सुरेन्द्र केसी – BRTNepal
राज्यको ५ अर्ब गायब : राज्यकोषको एक रुपैयाँ पनि चलाउँदिन : डा. सुरेन्द्र केसी
बिआरटीनेपाल २०७५ माघ २२ गते ११:४७ मा प्रकाशित
डा. सुरेन्द्र केसी राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा चिनिन्छन्। स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिने उनले नेपालका समसामयिक घटनाको बारेमा आफ्ना कुराहरू मिडियामार्फत राखिरहेका हुन्छन्। करिब ३ दशकदेखि प्राध्यापनमा सक्रिय रहेका उनी अहिले भने रि टायर भएका छन्।
पछिल्लो समय उनी क्यान्सरबाट पनि पीडित छन्। क्यान्सरबाट आफू पीडित भन्दै सरकारको एक रुपैयाँ पनि नचाहेको केसीले बताए। यसै विषयमा बोल्दै उनले भने, ”उपचारको नाममा भन्दै करोडौँ रुपैयाँ राज्यको लुट्ने गर्छन्। आफ्नो बल प्रयोग गरेर स्वास्थ्य भए पनि बिरामी भनेर राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काम भइरहेको छ। बेथालाई पनि उठाएर राजनीतिमा लेराउने गर्ने गर्छन् जुन म गर्न चाहन्न।” यस्तो प्रवित्तिले सचिक्कै बिरामी हुँदा पनि बदनामी सहनुपर्ने बताए।
सरकारले पद किनबेच देखि पारिद भएको निर्देशिका नै लुकाएर करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालका नेताहरूको शक्तिप्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि खराब रहेको उनको गुनासो छ । मुलुकको विकासको लागि नेताहरू भौतिक, नैतिक र राजनैतिक रूपमा स्वस्थ हुन जरुरी रहेको केसीको भनाई छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २३ दिन देखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनमा सरकार संवेदनाहीन भएको आरोप प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले लगाएका छन्। प्राध्यापक केसीले अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य तलमाथि भए स्वयं सरकार त्यसको जिम्मेवार हुने बताएका छन्।
भ्रष्टाचारीहरू माथिको कारबाही, ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको प्रकरण लगायतका विषयमा सरकारले केही पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । प्र. म ओलीको कुरा र व्यवहार कुनै तालमेल नरहेको केसीले आरोप लगाए। उनले ओली सरकारबाट जनताले केही नपाएको र सरकारप्रति सबै जनतामा वितृष्णा जागेको उनले बताए। केसीले तुलनामा ओलीभन्दा प्रचण्ड राम्रो र गतिशील नेता भएको उनको दाबी छ। हेर्नुहोस् डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग गरिएको कुराकानी…